Oniversite Pakistaney Iray Miteny Amin’ny Mpianany ‘Tsy Misy Mahazo Mampiaraka Intsony’ · Global Voices teny Malagasy
Oniversite Pakistaney Iray Miteny Amin'ny Mpianany ‘Tsy Misy Mahazo Mampiaraka Intsony’
Voadika ny 03 Jona 2016 6:42 GMT
Universiten'i Sargodha, Campus-n'i Lahore. Saripikan'i Jibran Sammi / MSc IT
Tohina ny mpianatra avy amin'ny Oniversiten'i Sargodha, Campus an'i Lahore, tamin'ny fiandohan'ny volana lasa teo raha naharay naoty hafahafa avy amin'ny fitantanana ny sekoly: namoaka fandrarana fifandraisan'ny lahy sy ny vavy “miaraka” ny Fiaraha-manaben'ny campus. Hatramin'ny nisokafany tamin'ny 2002, sady nisy lahy no nisy vavy ny mpianatra tao amin'ity oniversite ity.
Ny tenimita, izay nanonona ny fitarainan'ny ray aman-dreny amin'ny “fifaneraserana tsy mety,” dia nosoniavin'ny sekreteran'ny vaomieran'ny fitsipi-pifehezana ao amin'ny sekoly, Dr. Arbab Khalid Cheema. Elabe talohan'izay dia efa nifampizarana fatratra tao amin'ny media sosialy ny kopian'ny tenimita. Nilaza ny lahatsoratra:
Amin'ny fijerena ny adidy ara-kolontsaina sy ara-pivavahantsika sy noho ny fitarainan'ny ray aman-dreny, dia voarara tanteraka ato amin'ny Oniversite ny fifandraisan'ny mpianatra lehilahy sy ny mpianatra vehivavy.
Tsy mahazo alalana hipetraka na aiza na aiza ato amin'ny Oniversite ho tahaka ny olo-miaraka ny mpianatra. Na izany aza, dia afa-miara-mipetraka ao anatin'ny vondron'olona telo noho ny mihoatra ry zareo.
Ho setrin'izany, nitaraina ny mpianatra fa te-hampihatra ny fenitra ara-kolontsaina sy ara-pivavahana ny oniversite. Nanoratra tao amin'ny lahatsoratra Facebook nifampizarana fatratra i Waseem Altaf:
Raha tsy olana intsony ho an'ny sekoly manana fianarana avo kokoa ao amin'ny tontolo efa manana ny fahazavana izany fiaraha-manabe izany, dia tohina amin'ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy ato amin'ny campus – sao manao fahotana eo ireto lazaina ho mpanabe any amin'ny oniversite maro dia maro.
Raha tokony hifantoka any amin'ny fanatsarana ny taranjam-pianarana, ny fahafahan'ny fakiolte mampiditra mpianatra maro kokoa, ny tranomboky ary ny laboratoara ry zareo, dia ilaozan-dry zareo manahy kokoa amin'ny “fiainam-bavaka sy ny toetra” ananan'ny mpianatra.
Efa ela talohan'izany ny mpisera aterineto no efa nanampy adihevitra amin'ny tokony ho fitafin'ny mpianatra oniversite izay mametraka izao fepetra manaraka izao:
Ny fitafiana anaovana dia hadio, ho voakojakoja, tsotra ary mitaratra ny kolontsaina iasantsika. Ny fandraram-pitafiana dia tsy natao hanindrina fihenjanana eo amin'ny lalàna napetraka fa natao hifanaraka amin'ny fanahin'ny fitsipi-pifehezana izay andrin'ny fiainana ato amin'ny Oniversiten'i Sargodha, Campus-n'i Lahore.
Ny fitsipi-pitafian'ny sekoly dia mametraka akanjo samihafa ho an'ny lahy sy ho an'ny vavy, ary mametraka vesatra be kokoa ho an'ny vehivavy tsy hikojakoja tarehy sy tsy hanao firavaka “tafahoatra”, ary mba tsy hisy fanamarihana vetaveta ny akanjo. Ny tsy fanarahana izany fitsipi-pitafiana izany dia mety handoavana onitra ary mety ho tonga amin'ny fandroahana mihitsy aza.
Nandray anjara tamin'ny fikatrohana 16-andro hampitsaharana ny herisetra amin'ny vehivavy, tamin'ny 2008 ny mpianatra avy amin'ny Oniversiten'i Sargodha. Sary avy amin'ny CWGL.
Maro ny mpisera Twitter no miampanga ny oniversite ho “mametraka lalàna ara-maoraly”:
Nahatratra haavo vaovao indray ny fametrahana lalàna ara-maoraly
tsy mahazo miara-mipetraka ny mpianatra lahy sy ny mpianatra vavy ao amin'ny oniversiten'i Sargodha
Tsy nieritreritra ny hoe ho any aho, fa ampahatsiarovy aho tsy hankany amin'ny Oniversiten'i Sargodha mihitsy.
Nanontany mpikatroky ny zon'olombelona Arshad Mahmood hoe inona moa izany no heverin'ny fitantanan'ny oniversite ho “fifaneraserana tsy mety”:
Nanara-dia ny Oniversiten'i #Swat ny Oniversiten'i #Sargodha. Eo indrindra isika, inona ny fifaneraserana tsy mety?
Fotoana elaela izany, nisy tranga tahaka izao nolazaina fa nisy tao Pakistan tao amin'ny Oniversiten'i Swat, Kyber Pakhtunkwa, izay niheveran'ny mpitantana handrara ny fiarahan'ny mpianatra lahy sy vavy mandeha tsiroaroa sy miara-mipetraka, na anatiny na ivelan'ny [oniversite]. Ny mpianatra tratra mandika izany fandrarana izany dia mety ho tratran'ny fandoavana onitra mitetina PKR 5000 ($47). Nitsipaka izany hevitra izany anefa ny Mpitantana lefitra ary naatony ny lehiben'ny mpiandraikitra ny fitsipi-pifehezana ho fepetram-panasaziana.
Nifanandrify tamin'ny fiakaran'ny satan'ny oniversite pakistaney maro eo amin'ny sehatra iraisampirenena izao fitsipi-pitafiana sy fanenjehana ny fihetsika ara-pananahana ao amin'ny campus izao. Toerana iraisana ao Pakistan ny fiaraha-manabe [fiarahan'ny lahy sy ny vavy mianatra] ary mandrafitra ny ivontoerana folo voalohany [ambony indrindra], araka ny nolazain'ny Vaomieran'ny Fampianarana Ambony. Ho an'ny mpianatra sy fianakaviana tsy mahazoazo aina amin'ny fiarahan'ny lahy sy ny vavy mianatra, dia mbola maro ny oniversite natokana ho an'ny lahy na natokana ho an'ny vavy ao an-toerana.
Milaza ny mpitsikeera fa fanodinan-tsaina tsy hijery ny zava-dehibe kokoa ny fikirizana hifantoka amin'ny fampihatahana ny lahy sy ny vavy any amin'ny oniversite, izany zava-dehibe kokoa izany dia ny fanamby mitokana amin'ny fanatsarana ary avy eo amin'ny fananganana ny rafi-pampianarana ambony ao amin'ny firenena.
05 Jolay 2021Eoropa Afovoany & Atsinanana